Ahoana ny fomba hanaovana lalao - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Ahoana no hanaovana lalao
Ahoana no hanaovana lalao
lalao, io zavatra io izay toa tsy dia mampiasa firy isika nefa mametraka teboka tantaram-pitiavana sy tsy misy fitiavana foana rehefa mandrehitra labozia, afo am-patana sns.
Ity misy horonantsary iray amin'ny fizotran'ny famokarana azy. Ao amin'ny horonantsary dia lalao vita amin'ny baoritra efa voaodina izy ireo, avy amin'ny fisaka, fa tsy ny hazo, na ireo taratasy voahodina. Saingy hankafizanao ny fanamboarana azy ;-)
Ahoana ny fanaovana lalao: fanamboarana, fitsaboana ary fitaovana
Ny lalao voalohany natomboka tany Sina tamin'ny taona 577 dia nisy hazo kesika natsofoka solifara. Ny lalao fifandonana voalohany dia noforonin'ny mpahay simia anglisy iray antsoina hoe 1827 John walker. Tsy toy ireo ankehitriny, nanolotra fofona tsy mahafinaritra izy ireo ary mety ho mahery setra ny fandoroana azy ireo.
Tena azo antoka ny lalao anio ary hihena ny fofona afaka segondra. Amin'ny fizotry ny horonantsary dia vita amin'ny baoritra voaary izy ireo izay mora sy henjana mba mahazaka ny lanjan'ireo singa simika amin'ny lafiny iray.
Ny baoritra dia tapaka amin'ny fampiasana stamper. Avy eo, tamin'ny alàlan'ny maty sy ny lelany dia nanapaka fonosana 120 match izy ireo. Ity gazety ity dia mahavita manao tadiny 500 isa-minitra. Avy eo dia mandalo fandroana savoka mafana izy ireo izay mandona ny ampahatelon'ny halavan'ny tsipika tsirairay ary maina ao anaty lafaoro mandritra ny 15 segondra. Ny ataon'ny savoka dia mampihena ny taham-pandoroan'ny singa simika amin'ny alàlan'ny fihazonana ny lelafo mandritra ny 4 na 5 segondra.
Inona no atao amin'ny lalao?
Ireo singa simika ireo dia
gelatin sy silica hamatotra azy ireo amin'ny lalao
potassium chlorate sy proteinina biby ho an'ny okididia,
solifara hamelomana ny lelafo
ary mpameno roa izay tsy milaza ny anarany.
Ny singa rehetra dia afangaro amin'ny vatosoa. Mampiseho vatosoa 317-litatra ilay horonantsary izay ahalalana lalao 325 tapitrisa
Ny kasety an'ny lalao dia voahosotra miaraka amin'ny paty amin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo amin'ny kasety ary manandratra ny paty miaraka amin'ny rol. Amin'ny roa voalohany dia azo antoka fa ny paty dia tratran'ny aloha sy aorian'ny lalao, miaraka amin'ny fahatelo, izay mihodina amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa, nesorina ilay paty be loatra.
Avy eo dia mandeha 365 metatra ny lalao raha maina ny mpankafy azy ireo. Ny orinasa dia ao amin'ny 22 ºC, izay ny mari-pana mety tsara mba ho maina sy hihamafy ireo singa simika
Miaraka amin'ny Silicon, phosforus mena ary lakaoly no anaovan'izy ireo ny scraper izay hikosehana ilay lalao
Farany, ny milina iray dia manapaka ny lalao 10 ka hatramin'ny 10, manapaka ny fonony izay nataony ary manangona azy
Manisa sy mamono ireo boaty izy ireo amin'ny farany. Dingana mandeha ho azy tanteraka izy io.
Manoro hevitra an'ity toko ity ihany koa aho amin'ny e-book avy amin'ny Instituto Cervantes, izay ahariharin'izy ireo teknika sy tarehimarika amin'ny famokarana lalao artisanal.
Tsy misy isalasalana, rendrarendra.
Masinina manampy binary
Ahoana ny fomba fananganana motera fikandrana
1 Ahoana ny fanaovana lalao: fanamboarana, fitsaboana ary fitaovana
1.1 Inona no atao amin'ny lalao?
2 Loharanom-baovao mahaliana